दाहालको आरोप: एमालेहरु चप्पले र सडकछाप थिए, महाकाली बेचेको पैसाले काठमाडौँमा घर बनाए — Imandarmedia.com
१नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?
२स्वस्थानी ब्रत आज समापन गरिँदै
३आज र भोलि पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
४विश्वभर ८ करोड ९५ लाखभन्दा धेरैले जिते कोरोना
५चिनियाँ सरकारले मुस्लिम अल्पसंख्यक उईघुर जाति माथी नरसंहार गरिरहेको बेलायती प्रतिवेदन सार्वजनिक
६भारत र चीनका विदेश मन्त्रीबीच ७५ मिनेट फोन-वार्ता
७१३ वर्षीया बालिका बलात्कर गरेको आरोपमा एक युवकलाई १८ वर्ष कैदको फैसला
८काठमाडाैंमा फेरि बर्डफ्लु देखियाे, कुखुरा र दाना नष्ट
९मलेसियामा कोरोना विरुद्धको पहिलाे भ्याक्सिन शुरू
१०ओली-प्रचण्डसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने नगर्नेबारे कांग्रेसले गर्यो यस्तो निर्णय
११दक्षिण कोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन गर्दा नेपाली खुशी
१२हात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
दाहालको आरोप: एमालेहरु चप्पले र सडकछाप थिए, महाकाली बेचेको पैसाले काठमाडौँमा घर बनाए
काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले पूर्वएमालेहरु चप्पले, सडक छाप र खाते भएको आरोप लगाएका छन् । उनले पूर्वमालेको नेताहरु चप्पलसँग काठमाडौँमा पसेका बताउँदै उनीहरुले बनाएका घर र सम्पतीमाथि प्रश्न उठाए ।
एक अन्तरवार्ताको क्रममा दाहालले पूर्वएमालेका नेताहरु चप्पलसँग काठमाडौँ प्रवेश गरेको बताउँदै उनीहरु सबैले महाकाली सन्धी गरेवापत आएको कमिसनबाट घर बनाएको बताए । “यी एमालेहरु जति छन्, ति सबै खाते हुन्, यी खाते र चप्पलेहरुले महाकाली सन्धी गरिदिएवापत आएको पैसाबाट काठमाडौँमा घर बनाएका हुन्” दाहालले भने । उनले महाकाली सन्धीमा सम्झौता गरेवापत पूर्वएमालेका नेताहरुलाई अर्बौ रुपैयाँ आएका दाबी गरे । उक्त कुरा एमाले विभाजनलगायतका घटनाले पुष्टि गरिसकेको बताए ।
दाहालले तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भएकै बेला किर्ते वारिसे तयार गरेर मतदान गरेर ओली र नेपालले महाकालीको पक्षमा बहुमत पुर्याएको बताए । यो घटना अपराधिक भएको बताउँदै अहिले केपी ओलीहरुसँग बोल्ने नैतिकता समेत नभएको उनको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हैसियत नेपालका नक्सा प्रकाशित गर्ने नभएको दाहालले बताए ।
उनले महाकाली सन्धीमा अहिले सडक बनाइएको भूगोल भारतलाई दिइसकेकोले नक्सा निकाल्न नसकेको बताए । मनमोहन अधिकारी असहमत हुँदाहुँदै अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधव कुमार नेपालले घृणित तरिकाले महाकाली सन्धी गरेको दाहालले बताए । ओली भारतकै प्यादा भएकोले गुमेको जमिन ल्याउन पहल नगर्ने दाहालले दाबी गरेका छन्।
केही दिन पहिला प्रधानमन्त्रीले नक्साभन्दा भूगोल नै फिर्ता ल्याउन लागेको भन्ने भनाई नक्सा ननिकाल्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले भारतले अतिक्रमण गरेको भूगोल फिर्ता ल्याउने औकात ओलीको नभएको समेत बताए ।
दाहालले मदन भण्डारी हत्याकाण्डबारे तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति दिए । उनले दमन भण्डारीको हत्यापछि पूर्वएमाले छाडा भएको समेत बताएका छन्।